Home Ulo oru Europe Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of Football Genius onye aha ya kacha mara; "Fabs". Fabian Delph Child Story and Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Fabian Delph Child Story bụ ihe na-adọrọ mmasị, ọ bụrụ na ọ bụghị ihe omimi - ọ bụ akụkọ banyere nwata dị umeala n'obi si n'ezinụlọ siri ike. N'agbanyeghị na papa ya gbahapụrụ ya, Delph bịara bụrụ onye a gọziri agọzi n'egwuregwu football. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na -Ndụ mbido
A mụrụ Fabian Delph na Ụbọchị 21st nke November 1989 nye nne ya, Donna Delph na nna na-amaghị ama na Bradford, United Kingdom. Ezinụlọ Fabian Delph kewapụrụ mgbe ọ bụ nwa ewu.
Dị ka ọ gwara ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ ahụ, papa ya hapụrụ Fabian mgbe ọ bụ nwata.
Ná mmalite nke oge ọ bụ nwata, e kwuru na nna papa Fabian nwere ike ịpụ apụ mgbe ọ dị obere ka ọ cheta. Nke a mere Fabian, nne ya na ụmụnne ya na-abanye n'otu ala dịpụrụ adịpụ ná mpụga obodo Bradford.
Mmetụta nke Mmebi Nne na Nna Delph: Onye ọ bụla nke biri site na nkwarụ nne ma ọ bụ nna ga-amarakwa nke ọma ihe mgbu nke mmetụta uche ọ nwere ike ịkpata. O doro anya na nke a mere ka Fabian na ụmụnne ya mebie mmetụta uche. Mmetụta ahụ pụtara ìhè n'ụzọ doro anya n'ịgbalite ọrụ ya.
Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na -Ọrụ Ndị Nne
Nne nwanyị Fabian, Donna Delph bụ onye nyere nwa ya aka ịchọpụta ọrụ ya n'oge na-adịghị anya. Maka Fabian, nhụsianya kwụsịrị mgbe ọ bụla football nọ n'ụkwụ ya.
Fabian's mum Donna kwesịrị inweta ọtụtụ ụgwọ dị ka ọ kpọtara ya ma jide n'aka na ọ na-enwe mmetụta ọjọọ nke ọha na eze. N'oge ahụ, ezinụlọ Fabian Delph biri na akụkụ siri ike nke Bradford ebe ndị mmadụ nwere ike kpafuo na mmetụta ọjọọ ha nwere.
Na-etolite, Fabian nwere mkpebi siri ike iji mee ka nrọ nrọ ya mezuo ma ọchịchọ ya ịghọ ndị ọkachamara ọkachamara abụghị nanị ihe na-agafe agafe. Mgbe ọ bụ nwa okoro, otu n'ime ihe kasị mkpa Fabian nwere bụ ịzụta ụlọ ya mgbe ọ bara ọgaranya.
Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na -Site na Grass na Grace
Ezinụlọ Fabian Delph dara ogbenye ma enweghị ike inweta agụmakwụkwọ na ego ego maka nwa ya na ezinụlọ ya. Ọ bụ onye na-ehicha ihe nke na-enweta pennies (£ 278 n'otu izu abụọ) nke na-apụghị ịga ebe ọ bụla.
N'ụzọ dị mwute, Donna Delph bịara nwee obi mgbawa maka ihe ịga nke ọma nwa ya nwoke ma nwee ike ịghọ aghụghọ n'ebe ọrụ ya. Ọ na-etinye ego £ 45,052 na-eche na ọ bụ ihe ize ndụ bara uru. N'ụzọ dị mwute, a gbanwere ya, e jidekwa Donna. E nyere ndị nne na-atọ na ọnwa 12 ka ha kwụsị ikpe ụlọ mkpọrọ. Ọ dị mkpa ịmara na mgbe Donna na-alụ di ma ọ bụ nwunye mere aghụghọ ya, ọ nọworị na nwa oge maka mmejọ ndị dị otú ahụ. Ọ kwụsịrị na Ụlọikpe Ụlọikpe Bradford na June 2007.
Mgbe a hapụsịrị ya, Donna laghachiri ịrụ ọrụ dị ka onye na-ehicha. Ka oge na-aga, ọrụ Fabian Delph mere ka o nwee ihe ịga nke ọma. Ezinụlọ Fabian Delph Family gbakwunyere ụzọ dị ka football malitere ịkwụ ụgwọ. Fabian mechara kwụọ ụgwọ okwukwe nke nne ya site na ịzụ ụlọ ya nke mere imezu nrọ nwata.
Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na -Ndụ mmekọrịta
Obi abụọ adịghị ya, Football bụ osisi ọlaedo, ebe Fabian Delph chọtara nkasi obi ya echegbu onwe ya banyere eziokwu nke nna ya. Enye ama okụt ndọn̄esịt ke ini enye okosobode ima esie, Natalie ke 2013.
A mụrụ Natalie na March 31, 1990 (otu nwanyị karịa Fabian), na Manchester City, England. Ọ bụ onye ọchụnta ego na-enwe ọganihu, onye ọchụnta ego na nnukwu ego. Mkpakọrịta ha na-eto site na ezigbo enyi ọnọdụ na ezigbo ịhụnanya nke mere ka alụmdi na nwunye. Ọ dị mkpa ka ị mara na ndị enyi abụọ ahụ kwetara ịlụ di na nwunye n'ememe onwe ha otu afọ ha zutere.
Fabian bụ taa nwoke nwere ihe ịga nke ọma. Afọ abụọ mgbe alụmdi na nwunye ha gasịrị, di na nwunye ahụ nabatara nwa mbụ ha, bụ nwa nwoke. Ndị Fans maara papa Fabian dịka nna na-ahụ n'anya.
Mgbe amuchara nwa ha nwoke n'afo nwa nwa ya Aleya na 2015. Natalie mụrụ nwa ya nke atọ na 30th nke June, 2018 ụbọchị abụọ mgbe egwuregwu 2018 nke ụwa England na-eme egwuregwu megide Belgium na Kaliningrad. Nke a mere ka Fabian laghachi azụ England site na Russia n'oge iko ụwa iji hụ ọmụmụ nwa ya. Enye ama afiak aka Russia ke ama ọkọbọ edinam.
Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na -Ezigbo Ndụ Onye
Na 23 December 2008, ndị uweojii jidere Delph maka mpụ.
E boro ya ebubo aṅụrụ mmanya in Rothwell, Leeds, mgbe ya na ndị enyi ya anọ na-aga n'ụlọ ya. Delph nwere obi mgbaghara maka mpụ ya. Ọ rịọrọ ya ikpe na Ụlọikpe Magistrates nke Leeds ka ọ bụrụ na ọ na-ebu ya ịgba ọsọ ọsọ. E mesịrị kpoo ya £ 1,400 ma kwadozie ya na ịkwọ ụgbọala maka ọnwa 18.
Fabian Delph bụ Guyanese. Nke a yiri nke Igwe Igwe Ntughari Ruben.
N'ozuzu ya, Fabian Delph bụ nna magburu onwe ya nke maara usoro iji mee ka ụmụ ya nwee obi ụtọ. N'okpuru ebe a bụ foto nke nna dị mpako na nwa ya Aleya.
Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na -Ntoro ndi ntozu
Delph malitere ọrụ ya na football dịka nwata na Bradford City. Delph hapụrụ City na September 2001 iji sonyere Leeds United mgbe e kwusịrị ya ka ọ bụrụ onye nkụzi ha na-akụzi ihe na-enyere ndị Delph aka.
N'ịbụ onye toro, Fabian gara Tong Secondary School, nke ọ hapụrụ na 2006. Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, nnukwu nsogbu ego na ezinụlọ Delph nwere maka ego iji nwekwuo ọmụmụ ihe ya na oge football football na Leeds United Academy. Nke a bụ oge nne ya nanị ya na-azụ ụmụ gbabara n'ime ọnwụnwa nke aghụghọ.
Otú ọ dị, Lucy Delph gara Leeds United Academy na agụmakwụkwọ. Ọ na-agafe n'etiti ịkụ bọl ma na-amụ ekele maka agụmakwụkwọ Leeds ya. Mgbe ọ dị afọ 16 Delph, ọ gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ibe ya na Leeds, Boston Spa School.
Mgbe ọ kwụsịrị n'elu agụmakwụkwọ ya na-eto eto, Delph nyere ya nkwekọrịta ọkachamara mbụ na 11 January 2008. Site na March 2009, mmemme ya n'oge 2008-09 nwetara Nhọrọ Delph maka Onye Njikọ Otu Njikọ nke afọ. Nke a na-eduga Aston Villa ịchọ ọrụ ya. 6 afọ mgbe e mesịrị, ọ hụrụ onwe ya na-egwuri egwu na Manchester City. Ezumike, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Fabian Delph Child Story tinyere akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.